galmudugnews.com » Qorshe lala damacsanaa in lagu burburiyo Xariiradnews.com oo fashilmay. Home Contact US
Home » WARARKA » Qorshe lala damacsanaa in lagu burburiyo Xariiradnews.com oo fashilmay. Qorshe lala damacsanaa in lagu burburiyo Xariiradnews.com oo fashilmay. galmudug on
No Comment Views 164747Wasaaradda Warfaafinta Somaliland ayaa ku guuldareeysatay inay burburiso Shabaakadda wararka ee Xariiradnews.com .
Xariiradnews waxay todobaadyadii la soo dhaafay warar ku saabsan Xiriirka ka dhaxeeya Sirdoonka Jibouti iyo Madaxda Somaliland .
Maamulka Somaliland waxay aad uga caroodeen Warbixin lagu daabacay Xariiradnews oo qurbe joogta beesha Ciisaha cara gelisay.
Xariiradnews oo ku hadasha afka beesha Ciisaha ee dega Somaliland iyo Jibouti waxay Warbixintooda ku tibaaxeen in boqolaal ka tirsan beesha Ciisaha gaajo ugu dhimanayaan gobolka Salalka halka gobolada Togdheer,Hargeysa iyo Saaxil la geeyay deeqo samafala.
Xariiradnews waxay dabagal dheer ku sameeysay habka saamiga beelaha Somaliland ,iyadoo hoosta ka xariiqday in la xaqiray beesha Ciisaha.
Kooxaha loo yaqaan hackers-ka oo isticmaalayay IP adress Computer ku rakiban guri ku yaal Hargeysa ayaa weeraray Shabaakada Xariiradnews.com hasse yeedhee Maamulaha Website-ka Qadar Ahmed Faahiye ayaa sheegay inuu iska caabiyay .
Maamulaha Xariiradnews wuxuu tilmaamay in Computer-ka laga weeraray uu dhexyaalay Xafiiska Wasaaradda Warfaafinta Somaliland.
Qadar Faahiye oo ah Khabiir dhinaca IT wuxuu Website-kiisa ku xiray qalabka digniinaha bixiya marka la weeraro Database-kiisa ama Virus lagu tuuro.
Bilahii la soo dhaafay waxaa badanayay burcada Internetka ee jabsada Website-yada iyo Emailada bulshada.
Wasaaradda Warfaafinta Somaliland ayaa ku guuldareeysatay inay burburiso Shabaakadda wararka ee Xariiradnews.com .Xariiradnews waxay todobaadyadii la soo dhaafay warar ku saabsan Xiriirka ka dhaxeeya Sirdoonka Jibouti iyo Madaxda Somaliland .Maamulka Somaliland waxay aad uga caroodeen Warbixin lagu daabacay Xariiradnews oo qurbe joogta beesha Ciisaha cara gelisay.Xariiradnews oo ku hadasha afka beesha Ciisaha ee dega Somaliland iyo Jibouti waxay Warbixintooda ku tibaaxeen in boqolaal ka tirsan beesha Ciisaha gaajo ugu dhimanayaan gobolka Salalka halka gobolada Togdheer,Hargeysa iyo Saaxil la geeyay deeqo samafala.Xariiradnews waxay dabagal dheer ku sameeysay habka saamiga beelaha Somaliland ,iyadoo hoosta ka xariiqday in la xaqiray beesha Ciisaha.Kooxaha loo yaqaan hackers-ka oo isticmaalayay IP adress Computer ku rakiban guri ku yaal Hargeysa ayaa weeraray Shabaakada Xariiradnews.com hasse yeedhee Maamulaha Website-ka Qadar Ahmed Faahiye ayaa sheegay inuu iska caabiyay .Maamulaha Xariiradnews wuxuu tilmaamay in Computer-ka laga weeraray uu dhexyaalay Xafiiska Wasaaradda Warfaafinta Somaliland.Qadar Faahiye oo ah Khabiir dhinaca IT wuxuu Website-kiisa ku xiray qalabka digniinaha bixiya marka la weeraro Database-kiisa ama Virus lagu tuuro.Bilahii la soo dhaafay waxaa badanayay burcada Internetka ee jabsada Website-yada iyo Emailada bulshada.
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139549 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31889 hitsContact US - 30602 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26167 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25650 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25287 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23902 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23057 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22402 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22374 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21472 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21131 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21130 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20830 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19887 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19881 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19277 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18517 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17825 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17755 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17686 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16907 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16834 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15540 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15491 hits Home Contact US